XOG RASMI AH:- C/raxmaan Odowaa oo la qorsheeynayo inuu noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- C/raxmaan Odowaa oo la qorsheeynayo inuu noqdo madaxweynaha maamulka Galmudug
Ilo xog-ogaal ah oo aynu ka heleyno saraakiil ku sugan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa inoo xaqiijiyay in haatan la diyaarinayo qorshe xilka looga tuuraayo madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Qorshahaan ayaa sida la sheegay wato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo mudooyinkii ugu dambeysay ay xurguf siyaasadeed kala dhaxeeysay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sida la xaqiijiyay damacsan in xilkaas loo dhiibo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Xuseen Odowaa oo maalmihii ugu danbeeyay socdaal ku maraayay deegaanadda Galmudug.
Socdaalka C/raxmaan Xuseen Odowaa ee deegaanadda Galmudug ayaa sida la sheegay salka ku haaya arrintaan uu damacsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh, isaga oo Odayaasha beesha H/gidir ka dhaadhicinaya horumar la’aanta ku habsatay deegaanadda Galmudug, mudadii uu C/kariin Xuseen Guuleed xilka haayay, islamarkaana la joogo waqtigii is-badal lagu dhaqaaqi lahaa.
C/raxmaan Odowaa ayaa deegaanadda uu socdaalka ku tagay kulamo hoosaad ah kula yeeshay Odayaasha iyo Waxgaradka beesha H/gidir-Saleemaan ee magaalada Cadaado, kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda C/kariin Xuseen Guuleed.
Sidoo kale, waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qorsheynaya inuu talaabadan ku dhaqaaqo ka hor inta aan laga bixin waqtiga kala guurka, si deegaanadda maamulka Galmudug looga soo xulo xildhibaano xilliga doorashada codkooda isaga siin doona.
Dhinaca kale, kulamo xasaasi ah oo maalmihii ugu danbeysay ay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh iyo siyaasiyiinta ay ka wada-tirsan yihiin kooxda Dam-Jadiid ayaa lagu go’aamiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan xilka looga qaado madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.
Arrintaasi ayaa sida aynu xogtu ku heleyno loo sii mari doonnaa khilaaf dhinaca siyaasadda ah oo laga dhex abuuro xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug, si meesha looga saaro madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
Si kastaba oo ay ahaataba, madaxweynaha maamulka C/kariin Xuseen Guuleed oo ka mid ahaa siyaasiyiinta garabka midig ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan u muuqda mid dhinac kale u jan-jeersaday, kadib markii loo maaro waayay cadaalad darrada iyo sida uu madaxweyne Xasan Sheekh ugu eexanayo maamul goboleedka Puntland oo tiro ka bad-badis ah laga siiyay kuursta Aqalka sare ee baarlamaanka lasoo dhisi doonno ah.